Tababar loo furay ciidamo loogu talagalay ilaalinta deegaanka | Radio Muqdisho
Published on February 3, 2013 by admin · 1 Comment · 1,959 views
Tababarkaan maanta u farmay ciidamada ilaada deegaanka ee dowladda hoose ayaa waxaa ka qeyb galay wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha iyo amniga Qaranka, gudoomiyaha gobalka Banaadir, Taliyaha ciidanka Booliska Soomaaliya, saraakiil, janeraalo iyo qaar ka mid ah guddoomiyeyaasha dagmooyinka gobalka Banaadir, waxaana munaasabadab ay ka dhacay dugsiga tababarka Jeneraal Kaahiy ee magaalada Muqdisho.
Taliyaha ciidamada Booliska Soomaaliya Shariif Shiikhuna Mayee oo furitaanka tababarkaasi ka hadlay ayaa sheegay in tababarkaan uu yahay mid looga gol leeyahay sidii sara loogu qaadi lahaa aqoonta ciidanka ilaalada deegaanka ee dowladda hoose isgagoo xusay in 45 cisho uu socon doono.
Sidoo kale Guddoomiyaha gobalka Banaadir ahne duqa magaalada Muqdisho oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in tababarkaasi uu yahay mid sare loogu qaadayo ciidanka ilaalada deegaanka isago carabka ku dhuftay in looga bahanyahay ciidanka tababarka qaadanayo in ay si hufan ugu shaqeeyaan shacabka.
ugu danbeyntii waxaa halkaasi ka hadlay wasiir ku xigeynka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga Qaranka Jaamac Axmed Maxamed waxa uuna ugu baaqay ciidamadii maanta loo furayay tababarka in ay la yimadaan isbadal wax ku ool ah.
tababarkaan maanta xariga uu ka jaray wasiir ku xigeynka arrimaha gudaha iyo amniga Qaranka ayaa ah mid looga gol leeyahay sidii sare loogu qaadi lahaa aqoonta ciidamada ilaalada Deegaanka.
ilyaas xuseen farah hidig says:	February 3, 2013 at 8:05 pm	ciidamada tababar fiican halasiiyo tabarka ugu fiicane xaga sida ee dadka ula daqmi lahaayeen oo qof danbe laheen iska soo qabtaan ciidan daacadne hanoqdaan waa iga waano ciidan aan u diraayo asc